Global Voices teny Malagasy » Kanefa, Nisy Mpiaro Tontolo Iainana Iray Hafa Indray Novonoina Tany Honduras. Rahoviana Izany No Hifarana ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Kanefa, Nisy Mpiaro Tontolo Iainana Iray Hafa Indray Novonoina Tany Honduras. Rahoviana Izany No Hifarana ?
Voadika ny 04 Aogositra 2016 11:15 GMT 1	 · Mpanoratra Lully Nandika (en) i Danelle Hood, Tantely
Sokajy: Amerika Latina, Honduras, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Teratany, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
La Paz, Honduras. Wikimedia Commons, Sary ho an'ny Sehatry ny daholobe.
“Velona i Lesbia Yaneth, mitohy ny tolona! Velona i Berta, mitohy ny tolona!”
Ireo teny ireo no namintinanan'ny Filankevitry ny Olom-pirenena Vanona an'ny Fikambanam-bahoaka sy Teratany an'i Honduras (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras , na COPINH) , ny fanambaràny tao amin'ny blaoginy  mikasika ny famonoana  ny lehiben'ny vondrom-piarahamonina, Lesbia Yaneth Urquía, any Honduras, ny 7 Jolay. Hita tao anaty fanariam-pako ny vatany; voalaza fa niharan'ny ratra teo amin'ny lohany izy.
Ny firenena teo an-toerana sy ny iraisam-pirenena dia samy nanameloka  ity fahafatesany ity ho toy ny kapoka iray amin'ny adin'ilay mpiaro ny tontolo iainana, eo amin'ny faritra. Nifanojo tamin'ny fotoana izay niezahan'ny firenena hiarina taorian'ny fahalasanan'i Berta Cáceres , anisan'ny mpanorina ny COPINH, izay nisy namono efa-bolana lasa ilay vaovao.
Manao fanadihadiana ireo manampahefàna, ary nisy filazàna kely tamin'ny voalohany, ny mety ho nisian'ny resaka ara-politika tao ambadiky ny famonoana an'i Urquía. Taoriana kelin'ny nahafatesany anefa, dia nisy nanambara fa mpiasa iray amin'ireo raharaham-barotra  ao ambadiky ny tetikasa “hydroelectric”, izay notoherin'i Urquía no noahiahiana ho nahavita izany.
Maro ny resabe ary miparitaka be ny fahatezerana. Kanefa, mihoatra ireo adihevitra, manamafy ny loza lehibe atrehan'ireo mpikatroka mafana fo, miaro ny tontolo iainana sy zon'olombelona any Honduras indray, ny famonoana an'i Urquía
Mifototra amin'ny fampiasàna tany sy renirano ny fifandirana eo amin'ireo fikambanana tompontany teratany, ny governemanta sy ireo orinasa miasa aminà firenena maro. Mitaraina ireo mponina eo an-toerana hoe matetika trandrahana tsy nangalàna ny fanekeny akory ireo zavatra ireo. Ny Hetsiky ny Teratany Lenca ao La Paz (Movimiento Indígena Lenca de la Paz, na MILPAH) dia iray amin'ireo vondrona maro izay nitatitra  fa ireo fikambanana miasa aminà firenena maro dia nahazo fahazoana mitrandraka maimaimpoana tsy ara-dalàna ny tontolo iainana, tsy mba naka ny heviny mialoha akory. Hita ao amin'ny Fehin-kevitr'ireo Vahoaka Teratany sy Ireo Foko  (fantatra amin'ny hoe fehin-kevitra ILO 169) izany fepetra izany, izay mamehy ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin'ny Governemantan'i Honduras.
Manaramaso ny fivoaran'ireo tetikasa ireo vondrom-piarahamonina, mba hanamarinany fa tsy hisy vokadratsy eo amin'ny fomba fiainany ireo tetikasa ireo, ary mangataka izy ireo mba ho tafiditra amin'ny fanapahana hevitra, amin'izay ireo mponina mipetraka eo mba hahita tombontsoa ihany koa. Nikarakara hetsi-panoherana sy fibahanana  izy ireo, izay nanohintohina ny fanamboarana toy ilay tetikasa ” hydroelectric” ao La Paz  , mba hihainoana ny feon'izy ireo.
Taorian'ny famonoana an'i Urquía dia nomelohin ‘ny COPINH ny governemanta ao Honduras ho manana ny ràny eo an-tànany, ary ny tarfika sy ny polisy ho mpiray tsikombakomba. Toy izany ihany koa, nilaza ny COPINH fa meloka daholo ireo ivontoerana rehetra ao amin'ny governemanta, noho ny fanaovan'izy ireo ny mpikatroka mafana fo ho eo ambanin'ny loza mitatao tsy mitsahatra, amin'ny tombotsoa fanohanana hatrany ireo tetikasa izay misy vokadratsy eo amin'ny fiainan'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
‘Atsaharo ny famonoana anay nohon'ny fiarovanay ny zonay’
Miatrika teritery be ny governemanta ao Honduras mba hanao zavatra mikasika ny tsimatimanota izay nahatonga ny firenena ho lasa sehatra iroboroboan'ny vono olona. Araka ny asehoan'ity lahatsary zarain'ny fandaharam-baovao Hondured 13  ity dia maro tokoa ireo olona nanatrika ny fandevenana an'i Urquía::
Niantso ny governemanta  ireo fikambanana ara-tontolo iainana toy ny CANSAT Aqua Viva (Rano Velona) mba hampitsahatra ny fanenjehana ireo mpikatroka mafana fo miaro ny tontolo iainana toa an'i Cáceres sy i Urquía, :
Averinay ny fangatahan'ny COPINH amin'ny fitadiavana ny rariny amin'ny tsy famelàna ny famonoana ireo vehivavy roa, dia i Lesbia Cáceres Berta, ho tsy hisy fibaben-keloka. Manao antso maika amin'ny fanjakàna eto Honduras izahay, mangataka ny handrosoan'ireo fanadihadiana tena mifototra amin'ny zava-nisy, mba hanasaziana ireo tomponandraikitra tamin'ireo hetsika ireo, ary hanome alalana ny Vondrona Tsy Miankina misy Manampahaizana tantanan'ny Kaomisionan'ny Zon'olombelona eo amin'ny samy Amerikana mba hanadihady ny famonoana an'i Berta Cáceres.
Takianay ny hanatsaharan'ny Fanjakan'i Honduras ny fanenjehana sy fanitsakitsahana ireo zo maha-olombelona an'ireo mpikatroka mafana fo miaro ny tontolo iainana ; handroaka sy hanadihady maika ireo mpikambana ao amin'ny polisy sy miaramila tafiditra amin'ireo famonoan'olona iampangàna azy ireo, ary hametraka ireo fepetra rehetra ilaina mba hanarahan'ireo ivontoerana ireo andraikiny mba hiaro ireo mpikatroka sy hankahery ny asa fiarovantenan'izy ireo araka ny lalàna.
Ao amin'ny Twitter, ny Hetsika Mezo-Amerikàna an'ny Mpikatroka mafana fo Miaro ny Zon'ireo Vehivavy (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ), namerina nitantara ireo herisetra natao tamin'ireo mpikatroka mafana fo miaro ny tontolo iainana izay nitranga teo amin'ny faritra:
Bitsika: #ActivistAlert Tofoka amin'ireo herisetra atao amin'ny mpikatroka #DDHH  any Amerika Afovoany! #WeDefendTheActivists (Miaro ireo mpikatroka izahay)
Sary eo ankavia: 7 Jolay 2016. NOVONOINA. Lesbia Jameth Urquía. Mpiaro ireo zava-boahary natoraly i Lesbia Jameth Urquía, nanohitra ny fanamboarana ireo tohodrano any amin'ireo reniranon'ny departemantan'i La Paz. Ny taona 2009, taorian'ny fanonganam-panjakana dia niditra tao amin'ny COPINH izy, fikambanana tantanan'i Berta Cáceres, izay nisy namono ny 3 Martsa. Tena nihetsiketsika tokoa i Lesbia Janeth tamin'ny fanoherany ny fanomezana fahazoandàlana fanamboarana tohodrano maro ho an'ny orinasan'ny vadin'i Gladys Aurora López, filohan'ny Antoko Nasionaly sady filoha lefitry ny Kongresy Nasionaly.
Miaraka amin'izany, nanizingizina  mafy izao ny Tambazotra Amerikana Latina an'ny Fiarahamonim-behivavy sy Mpikatroka Mafana fo Miaro ny Tontolo Iainana (Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales ) :
Takianay ny hanatsaharan'ny governemanta eto Honduras ny famonoana ireo mpikatroka mafana fo mpiaro ny tontolo iainana. Atsaharo ny famonoana anay nohon'ny fiarovanay ny zonay.
Angatahanay ny vondrona iraisampirenena mba hitsangana hanohana ny zon'ireo mpikatroka mafana fo ireo, amin'ny fampiharana tanteraka ny lalàna, indrindra amin'ny raharahan'i Honduras, mba hohadihadiana ny famonoana vao haingana an'i Berta Cáceres sy Lesbia Yaneth Urquáa ary saziana mafy mba hanatsaharana ny tsimatimanota.
Manerana an'i Amerika Latina, kendrena amin'ny fanenjehana sy herisetra any amin'ireo firenena toa an'i Honduras, ireo mpikatroka mafana fo miaro ny tontolo iainana, toerana izay misy orinasa lehibe mifandray tendro amin'ireo tomponandraikitra ara-politika eo an-toerana na hery ara-toekarena, mitady ny hitrandraka ireo loharanon-karena natoraly.
Araka ny Global Witness , Honduras no “firenena misy famonoana olona be indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo natoraly,” ary araka ny tatitr'izy ireo “Ao Amin'ny Tany Mampidi-doza ,” mitombo be maneran-tany ireo tarehimarika:
Efa maherin'ny 3 isan-kerinandro izao ny tahan'ny famonoana ireo mpiaro ny tany sy ny tontolo iainana, taha izay mahatohina tokoa. Ao Amerika Latina sy ireo firenena any Azia Atsimo Atsinanana ny ankamaroan'ireo tranga voarakitra […]
Amin'ny ankamaroan'ireo tranga, mijanona tsy nahitam-bahaolana ireo famonoana. Araka ny lahatsoratry ny fikambanana How Many More  (Mbola Hisy Firy):
Isan-kerinandro, farafahakeliny olona roa no misy mamono noho ny fitsanganany manohitra ny famotehana ny tontolo iainana. Ny sasany tifirin'ireo polisy mandritra ireo hetsi-panoherana, ny sasany tifirin'ireo mpamono voakarama.Noho ireo orinasa mitady tany vaovao hotrandrahana, mitombo hatrany ireo olona manefa lafo hatramin'ny ainy noho ny fitsanganana eny amin'ny làlan'izy ireo.
Hitanay fa 116 farafahakeliny ireo mpikatroka mpiaro ny tontolo iainana nisy namono ny taona 2014 – izay efa ho roa avo heny ny isan'ireo mpanao gazety nisy namono tamin'io fotoana io ihany. Ny tena maha tohina dia tompontany teratany ny 40%-n'ireo niharan-doza, izay ny ankamaroan'ireo olona maty dia tao anatin'ireo fifandirana momba ny toby famokarana herinaratra ahodin-drano, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary fitrandrahana ho amin'ny fambolena. Tao Amerika Afovoany sy Atsimo, ny eo amin'ny telo ampahefatry ny fahafatesana nahazoanay loharanom-baovao.
Amin'ny sehatra manerantany, mety mbola ambony noho io no tena isan'ireo maty. Maro amin'ireo famonoana fantatray no niseho tany amin'ireo tanàna kely lavitra na lalina any anaty ala mikitroka, izay tsy dia manana fahafahana miserasera sy mampita vaovao amin'ny media ireo vondrom-piarahamonina ao aminy. Toa maro ireo famonoana tsy tafiditra tamin'ny rakitra.
Notaterin'ny tatitry ny fikambanana “Terreno peligroso” (Tany Mampidi-doza) fa nisy fahafatesana mpikatroka mafana fo niisa 185, voarakitra ny taona 2015 manerana ny tany — mitombo 60% raha oharina amin'ny taona 2014. Tany Amerika Latina no niseho ny 66% (122) tamin'ireo famonoana olona ireo.
Ankoatra izany, mbola manohy miteny mafy hatrany ireo fikambanana hafa  toy ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Eorôpeana ary ireo olon-tsotra ao amin'ny media sosialy . Lasa manontany tena ny ao Honduras hoe: Rahoviana ireo zava-doza ireo no hitsahatra?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/04/86273/
 Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras: https://www.copinh.org
 Ny firenena teo an-toerana sy ny iraisam-pirenena dia samy nanameloka: http://www.elheraldo.hn/pais/977887-466/honduras-muerte-de-ambientalista-lesbia-urqu%C3%ADa-trasciende-fronteras
 Berta Cáceres: https://globalvoices.org/2016/03/04/human-rights-activist-and-indigenous-leader-berta-caceres-is-assassinated-in-honduras/
 mpiasa iray amin'ireo raharaham-barotra: http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/capturan-los-asesinos-ambientalista-hondurena-lesbia-yaneth-urquia_327507
 Fehin-kevitr'ireo Vahoaka Teratany sy Ireo Foko: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100544.pdf
 hetsi-panoherana sy fibahanana: https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.co/2016/07/honduras-lencas-denuncian-que.html
 La Paz : https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(ciudad_de_Honduras)
 Niantso ny governemanta: http://censat.org/es/noticias/pronunciamiento-frente-al-asesinato-de-lesbia-yaneth-urquia-urquia-integrante-del-copinh
 Araka ny Global Witness: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-releases-new-data-murder-rate-environmental-and-land-activists-honduras-highest-world/
 Ao Amin'ny Tany Mampidi-doza: https://mg.globalvoices.orgfile:///Users/lenguaraces/Downloads/On_Dangerous_Ground.pdf
 How Many More: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/how-many-more/
 fikambanana hafa: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/397595-onu-denuncia-violencia-honduras/
 media sosialy: https://twitter.com/search?q=Lesbia%20Yaneth%20Urqu%C3%ADa&src=typd